musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Vaccine Kusarongeka Kunogona Kutadzisa Nyowani Kudzoreredza
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi
Jamaica Tourism Gurukota inodaidzira huwandu hwepasi rose hwehutachiona
Jamaica Gurukota Rezvekushanya Hon. Edmund Bartlett akatsigira kuti kuwedzerwa kuwanikwa kwepasirese majekiseni eECOVID-19 ndiyo kiyi yekushanya kwakazara uye kusimudzira hupfumi hwenyika. Izvi, sekuchema kwaakaita kukanganisika kwekusakwana kwekudzivirira, izvo zvaanoti zvinogona kukanganisa kupora kwepasirese.
Wakaenzana wekudzivirira pasi rose haungori chete hunhu hunodiwa asi zvakare inopa kwenguva refu pfungwa hupfumi.
Kusarongeka kwejekiseni kunopfuurira apo kunyangwe paine mishonga inodarika mabhiriyoni matanhatu yemajekiseni akagoverwa pasirese, ruzhinji rweaya ari munyika dzinowana mari yakawanda.
Nyika dzine hurombo zvakanyanya pasi pe1% yehuwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba.
“Hakuzovi nehutano hwakakura pasina kupera kwehutano hwehutano. Kuwana majekiseni kiyi kune ese ari maviri. Zvinosuruvarisa, panguva ino mudenda, kusaenzana kwejekiseni kunoramba kuripo apo kunyangwe paine mishonga inodarika mabhiriyoni matanhatu yemajekiseni akagoverwa, mazhinji acho ari munyika dzine mari zhinji asi nyika dzine hurombo dzine isingasviki 6% yevagari vevanhu vakabayiwa nhomba. Tinobvumirana kuti kubaiwa nhomba kwepasi rose kwakaringana hakusi kungoita zvehunhu chete asiwo kunopa nguva yakareba yezvehupfumi, ”Vakadaro Minister.
Minister vakataura chirevo ichi nezuro (Gumiguru 6), panguva yekuratidzwa kweiyo Sangano reAmerican States '(OAS) Makumi maviri neshanu Inter-American Congress yeMakurukota neHurumende-Yezvivakwa Vakuru. Izvo zvakaunza pamwechete vatashanyi vepamusoro, pamwe nevamiriri kubva mubazi rezvekutengeserana, vadzidzi, uye veruzhinji, kuti vaongorore nzira dzekudzora zvakashata zveECVID-19 pakushanya, pamwe nekushanya post-COVID-19.
Munguva yekutaura kwake, akakurudzira vatungamiriri venyika dzakasimukira kuti vagovane majekiseni nenyika dzinowana mari shoma, achicherekedza kuti, kubatana pamwe nekudyidzana kwakakosha pakuona chirongwa chinoshanda chekudzivirira pasi rese.
"Tichifunga nezvehunhu hwedenda, uye COVID-19, kunyanya, hakungavi nekushanyirwa kwakasimudzira kana kuenderera kwepasirese uko nyika dzinotambira mari dzakasara kumashure. Ichi ndicho chirevo cheiyo 2030 Agenda ye Sustainable Development - kuti tirege kukanganwa. Panyaya iyi, tinogamuchira uye tinotenda zvipo zvekubaiwa majekiseni kubva kune vatinoshanda navo uye tinosimbisa kuti idzi dzinofanirwa kunge dziri nguva dzakakodzera uye dzinoshanda, tichifunga nezvekupera kwemazuva emishonga, ”vakadaro.
Pakati pechirongwa makurukota nemasimba epamusoro ezvekushanya vakave nemukana wekuchinjana mazano nekuwongorora mutemo une chekuita nedenda reCOVID-19 munzvimbo dzekufamba uye dzekushanya uye nekuona nzvimbo dzakabatana dzekudyidzana pakati penhengo dzenyika kusimudzira kuvaka kwayo uye kupora zvichitevera denda.
Gurukota Bartlett parizvino ndivo Sachigaro weboka repamusoro-soro reOAS Working Group, iri kuvandudza chirongwa chezvekuita, chekudzoserwa kwemaindasitiri evafesi uye nendege.
Iri boka rinoshanda nderimwe remana, iro rakaziviswa panguva yechipiri yakasarudzika musangano weOAS Inter-American Committee on Tourism (CITUR) wakaitwa muna Nyamavhuvhu 14, 2020, kufambisa kugona nekukurumidza uye kwakaringana kwezvikamu zvekushanya nekushanya.